GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Bicol Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Lithuanian Malagasy Norwegian Nzema Oromo Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Telugu Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zande Zulu
GỊNỊ KA MMADỤ ỊDỊ UMEALA N’OBI PỤTARA?
Ọ bụrụ na e kwuo na mmadụ dị umeala n’obi, ihe ọ pụtara bụ na onye ahụ adịghị mpako ma ọ bụ okomoko. Onye ahụ anaghị eleda ndị ọzọ anya. Mmadụ ọ bụla na-ezughị okè, nke dị umeala n’obi, maara na o nwere ihe ndị ya na-agaghị emeli.
OLEE OTÚ MOZIS SI GOSI NA YA DỊ UMEALA N’OBI?
Mozis ekweghị ka ọkwá e nyere ya buwe ya isi. Ọ na-abụkarị mgbe e nyere mmadụ ọkwá ka a na-amata ma onye ahụ ọ̀ dị mpako ka ọ̀ dị umeala n’obi. Otu ọkà okwu a ma ama nke aha ya bụ Robert G. Ingersoll kwuru, sị: “Ọtụtụ ndị nwere ike idi ọdachi dakwasịrị ha. Ma, ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ụdị mmadụ onye nke ọ bụla bụ, nye ya ọkwá.” Ọ bụrụ na anyị echebara ihe a o kwuru echiche, anyị ga-ekweta na Mozis dị umeala n’obi. Gịnị mere anyị ji kwuo otú ahụ?
Mozis bụ nnukwu mmadụ n’Izrel n’ihi na Jehova mere ya onye ndú ụmụ Izrel. Ma, nke ahụ emeghị ka isi buwe Mozis. Dị ka ihe atụ, ka anyị lebagodị anya n’otú Mozis si gosi na ya dị umeala n’obi n’oge e wetaara ya okwu tara akpụ. A jụrụ ya n’oge ahụ na ọ bụrụ na nwoke anwụọ n’amụtaghị nwa nwoke, ụmụ ya ndị nwaanyị hà kwesịrị iketa ala ya. (Ọnụ Ọgụgụ 27:1-11) Okwu a abụghị obere okwu n’ihi na a ga-elere anya n’ihe ọ bụla e kpebiri na ya na-ekpe ikpe ọ bụla yiri ya n’ọdịnihu.
Gịnịzi ka Mozis mere? Ò chere na ya amarala ihe a ga-eme maka na ya bụ onye ndú ụmụ Izrel? Ò kwuru na ebe ọ bụ na ya nwere ọgụgụ isi, jeekwara Jehova ozi ọtụtụ afọ ma mara Jehova nke ọma, na ọ baghịzi uru ịjụwa onye ọzọ ihe a ga-eme?
Onye dị mpako agaghị aga jụwa onye ọzọ ihe a ga-eme. Ma Mozis mere ihe dị iche. Baịbụl gwara anyị, sị: “Mozis wee were okwu [ahụ] gaa n’ihu Jehova.” (Ọnụ Ọgụgụ 27:5) Chebagodịrị ihe a o mere echiche! N’agbanyeghị na Mozis eduola mba Izrel ihe dị ka afọ iri anọ, o weere okwu ahụ gakwuru Jehova kama ikpebi ya n’onwe ya. Nke a gosiri anyị n’eziokwu na Mozis dị umeala n’obi.
Mozis echeghị na ọ bụ naanị ya ruru eru idu ụmụ Izrel. Obi tọrọ ya ụtọ mgbe Jehova mere ka ụmụ Izrel ndị ọzọ ghọọ ndị amụma. (Ọnụ Ọgụgụ 11:24- 29) Mgbe nna nwunye ya tụụrụ ya aro ka o nyefee ndị ọzọ ụfọdụ ọrụ ọ na-arụ, Mozis mere otú ahụ. (Ọpụpụ 18:13-24) Mgbe ọnwụ Mozis ruwere, Mozis gwara Jehova ka ọ họpụta onye ga-anọchi ya n’agbanyeghị n’ahụ́ ka gbasiri ya ike mgbe ahụ. Mgbe Jehova họpụtara Jọshụa, Mozis ji obi ya niile nyere Jọshụa aka. Mozis gwakwara ndị Izrel ka ha rubere Jọshụa isi n’ihi na ọ bụ ya ga-eduba ha n’Ala Nkwa ahụ. (Ọnụ Ọgụgụ 27:15-18; Diuterọnọmi 31:3-6; 34:7) O doro anya na Mozis ji ọrụ Chineke nyere ya, nke bụ́ idu ụmụ Izrel, kpọrọ ihe n’ihi na ọrụ a nyeere ụmụ Izrel aka ife Chineke nke ọma. Ma, ihe bụ́ mkpa Mozis abụghị ka a mara na ya bụ onye ndú, mkpa ya bụ ime ihe ga-abara ndị ọ na-edu uru.
Anyị ekwesịghị ikwe ka isi buwe anyị n’ihi ọkwá anyị nwere ma ọ bụ n’ihi na ụbụrụ na-aghọ anyị nkọ. Anyị kwesịrị icheta na ọ bụrụ na anyị chọrọ ka Jehova nabata ozi anyị na-ejere ya, anyị ga-adị umeala n’obi mgbe niile. (1 Samuel 15:17) Ọ bụrụ n’eziokwu na anyị dị umeala n’obi, anyị ga na-agba mbọ ka anyị na-eme ihe a Baịbụl kwuru, nke bụ́: “Jiri obi gị dum tụkwasị Jehova obi, adaberekwala ná nghọta gị.”—Ilu 3:5, 6.
Ihe ọzọ anyị na-amụta n’aka Mozis bụ na ọkwá e nyere anyị ma ọ bụ ikike anyị nwere ekwesịghị ịbụ ihe kacha mkpa ná ndụ anyị, ka à ga-asị na a napụ anyị ya, nke anyị na-eme ná ndụ agwụ.
Ọ bụrụ na anyị adị umeala n’obi ka Mozis ọ̀ ga-abara anyị uru? À na-ajụkwa ajụ! Ọ bụrụ na anyị adị umeala n’obi n’eziokwu, ahụ́ ga-eru ndị anyị na ha nọ ala, ha ga na-akpakwa anyị nso. Nke ka nke bụ na anyị na Jehova Chineke ga-adị ná mma n’ihi na Jehova n’onwe ya dị umeala n’obi. (Abụ Ọma 18:35) Baịbụl kwuru, sị: “Chineke na-emegide ndị mpako, ma ọ na-egosi ndị dị umeala n’obi obiọma na-erughịrị mmadụ.” (1 Pita 5:5) Nke a kwesịrị ime ka anyị dị umeala n’obi ka Mozis.